कसरी बढाउने स्मरणशक्ति ? थाहापाउनुहोस् यी अचुक उपाय ! | YesKhabar
२०७९ साल जेष्ठ ६ गते, शुक्रबार
हेटौंडामा राप्रपाका सिंहले पछि पारे सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई
बाहन गरुड भए पनि भगवान विष्णु किन सर्पको ओछ्यानमा सुत्छन् ?
काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा स्वतन्त्रका शाह र उपप्रमुखमा एमालेका डङ्गोलको अग्रता कायमै
२०७८ साल माघ २ गते, आईतवार ११:५९ AM
हामी कहिले काहीँ आफैले राखेको बस्तु बिर्सेर हैरान बन्छौं । पछुताउँनु सिवाय विकल्प हामीसँग हुँदै । हामी चाहन्छौँ सबै भन्दा तेज दिमाग भैदिए हुन्थ्यो । आरिस र प्रतिस्प्रधा गर्न खोज्नु मानव जातीको गुण नै हो । स्वाभाविक पनि । तर, वास्तवमा सबैसँग त्यो क्षमता नहुनसक्छ । निरन्तरतामा भर पर्छ । मानिस शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन अत्यान्तै आवश्यक पर्छ । दिमागलाई कसरी सधैँ स्वास्थ र तेजिलो राख्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्रस्तुत गरेका छौँ ।
हिडडुल गर्ने:हिडडुल गर्दा दिमागको स्मरणशक्ति बढ्ने भएकोले नियमित हिँड्ने बानी बसाउनुपर्छ । जति हिडडुल गर्न सक्यो त्यति नै स्मरणको लागि सहयोग गर्ने हिपोक्याम्पस बढ्ने अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । तसर्थ जति सक्दो बढी हिड्नुहोस्, ताकी तपाईँको दिमाग बढी सक्रिय होस् ।
कफी पिउनुहोस्: ठिक्क मात्रामा नियमित कफी पिउनाले स्मरण क्षमतामा सकरात्मक असर गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । बिहानको कफी वा चियाले स्मरण तेज गर्छ । कफीको असर लामो समयसम्म रहने भएकोले दिमागलाई फूर्तिलो बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
पर्याप्त निन्द्रा:दिमागलाई तेजिलो बनाउन पर्याप्त निन्द्रा पनि आवश्यक छ । गहिरो निदाउने व्यक्तिको स्मरण शक्ति पनि बलियो हुन्छ । दिमागले राम्रोसँग काम गर्न बयस्कको दिमागलाई दैनिक ७ घण्टा निन्द्राको आवश्यक पर्छ ।
खेल खेल्ने:खेल खेल्दा दिमाग सक्रिय हुन्छ । तसर्थ फुर्सदको समयमा खेल्नुपर्छ । शारीरिक रूपमा बाहिर जान समय नभएमा कम्पयुटरमा नै चेस, पजल तथा अन्य खेल्दा दिमाग तेजिलो हुन्छ । किनकि खेलले दिमागको व्यायाम गराउँछ ।
गीत सुन्ने र गाउने:स्मरण शक्ति बढाउन गीतले पनि ठुलो सहयोग गर्छ । गीत सुन्दा दिमागको कोषलाई बलियो बनाउँछ ।आफ्नो लयबद्धताका कारण गीत सजिलै तपाईँको दिमागमा बस्छ । आफ्नो मनपर्ने गीतको धुनमा त्यस चिजलाई सेट गर्नुहोस्, जसलाई तपाईँ सम्झन चाहनुहुन्छ । यसबाट तपाईँले कुनै पनि कुरा लामो समयसम्म याद गर्नसक्नुहुनेछ ।
विषयलाई जोड्नुहोस्त:तपाईं जुन चिज सिकिरहनुभएको छ, त्यसलाई पुरानो विषयसंग जोड्न सिक्नुहोस् । यसले तपाईँलाई दुवै कुराका बारेमा आवश्यक कुराहरू सम्झन सजिलो हुनेछ ।
दोहोर्‍याउनुहोस्: यदि कुनै चिजलाई मनमनै दोहो¥याउनुहुन्छ भने त्यसलाई सम्झन सजिलो हुनेछ । अथवा, कुनै पनि कुरालाई कागजमा निरन्तर लेखेर पनि स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट लेखिएका शब्द स्मरण गर्न सजिलो हुनेछ ।
नयाँपन अपनाउनुहोस्: यदि तपाईँ कुनै घटनाक्रमलाई याद गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ भने कुनै नौलो तरिका अपनाउनुहोस् । उदाहरणका लागि तपाईँ नौवटा ग्रहको नाम सम्झने प्रयास गरिरहनुभएको छ भने ‘माई भेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नाइन प्लानेट’ को तरिका अपनाउन सक्नुहुनेछ । यसमा हरेक शब्दको पहिलो अक्षरबाट ग्रहको नाम आउँछ । अथवा, सूत्रबद्ध रूपमा पनि शब्द सम्झन सक्नुहुनेछ ।
कार्डमा लेख्नुहोस्: जब महत्त्वपूर्ण बार, गते, सूत्रआदि सम्झने प्रयास गर्नुहुन्छ भने यसका लागि फ्लायस कार्डमा लेख्नुहोस् । जब तपाईँलाई आवश्यक पर्नेछ, त्यो कार्ड हेर्न सक्नुहुनेछ ।
पढेको कुरालाई महसुस गर्नुहोस् :पढेको कुरालाई मष्तिष्कमा एक तस्बिर बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, यसबाट लामो समयसम्म याद राख्न सकिन्छ । पढिरहेको बेलामा तपाईँ ती शब्दका बारेमा सोच्न सुरु गर्नुहोस् । कल्पना गर्नुहोस्, त्यो कस्तो देखिनेछ, त्यसको सुगन्ध, आकार प्रकार कस्तो हुनेछ, स्वाद कस्तो हुनेछ आदि ।
उदाहरण दिनुहोस् :जब तपाईँ कुनै पनि कुरालाई असल जिन्दगीसंग जोडेर हेर्नुहुन्छ भने, त्यो मष्तिष्कमा एक किसिमको छाप बनेर बस्छ र सम्झन सजिलो हुन्छ । के पनि भनिन्छ भने मानिसले आफ्नो मष्तिष्क आफ्नो जीवनकालमा मुस्किलले ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्न सक्छ, बाँकी भाग प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसैले ती बाँकी भाग पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
कोरोना र रुस– युक्रेन द्वन्द्वका कारण मानसिक असर देखियो : विश्व स्वास्थ्य संगठन
बजार अनुगमन: चामललगायत सामान जफत, नगद जरिवाना, अखाद्य वस्तु नष्ट
नियमित यौनसम्पर्क नगर्ने व्यक्तिमा देखिन्छ यी समस्या
अब मनमोहन अस्पतालमा आइभिएफ सेवा; निःसन्तान दम्पतीलाई राहत
धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरमा पुन: अशोक ब्याञ्जु उप–मेयर निराजन जंगम विजयी
सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गर्ने एक जना पक्राउ
काठमाडौँ महानगर–३० मा कांग्रेस विजयी
दाङको घोराही उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले विजयी
नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले निर्वाचित